हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता January 16, 2022
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| किलियन एम्बाप्पे र एरलिंग हालान्ड यस समयमा विश्व फुटबलमा सबैभन्दा बढी रुचाईएका दुई प्रतिभाहरू हुन्।
आफ्नो क्षमताले ठुला क्लबका लागि हटकेक बनेका दुई युवा खेलाडीको भविष्य छिट्टै तय हुन सक्छ।
यसैबीच रियल म्याड्रिडले दुबै खेलाडीहरूलाई एस्टाडियो स्यान्टियागो बर्नाबेउमा आफ्नो परियोजनाको लागि उत्तम फिटको रूपमा हेरिरहेको बताईएको छ।
तर निर्णयहरू अहिले नै लिनुपर्नेछ किनकि उनीहरूले २०२२/२३ सिजन अगाडि आफ्नो टोली निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्।
रियल मड्रिडलाई हालान्ड ल्याउन अर्को सिजन कुर्नु पर्ने हुन सक्छ र युवा स्ट्राइकर माझ धेरै अन्य पक्षहरू पनि घुमिरहेका छन्।
तर फ्रेन्च स्टार एम्बाप्पेको मामला भने बेग्लै छ। गत सिजन झन्डै २०० मिलियनको प्रस्ताब अस्विकार गरेको पेरिस सेन्ट-जर्मेन संग एम्बाप्पेले नयाँ सम्झौता गरेका छैनन्।
उनको रोजाईमा सधै रियल मड्रिड रहेको उनले बारम्बार जिकिर गर्ने गरिरहेका छन्।
च्याम्पियन्स लिग राउन्ड अफ १६ मा रियल म्याड्रिड र पीएसजीको आगामी भिडन्तका कारण एम्बाप्पेसँग कुरा सुस्त भएको बेला हालान्डले यस महिना निर्णय लिने तयारी गरेको देखिन्छ।
एमबाप्पेसँग केही पनि परिवर्तन भएको छैन, यद्यपि उनी र रियल म्याड्रिड दुवै एक अर्कालाई चाहन्छन्। पीएसजी र खेलाडीको टोलीबाट आएको दबाबको बाबजुद उनको सम्झौता यस समरमा सकिन गैरहेको छ। तर, यो विशाल महाद्वीपीय खेल वरिपरि कुनै घोषणा आउने सम्भावना छैन।
पीएसजीले एम्बप्प्पे संगको सम्झौता थप दुई वर्ष लम्ब्याउने प्रयास जारी राखेको खबरले रियल म्याड्रिडलाई रोकेको छैन। उनीहरूलाई थाहा छ कि फ्रान्सेली क्लब उक्त कदम चाहान्छ तर मड्रिड विश्वस्त छ कि केहि परिवर्तन भएको हुने छैन र एम्बप्पे संगको सम्झौता आफुहरु संगै हुनेछ।
हालान्डका पक्कै पनि स्पेनमा उनका प्रशंसकहरू छन्, किनकि रियल म्याड्रिड र बार्सिलोना दुबै बुन्डेसलिगामा विगत दुई वर्षमा प्रति खेल औसतमा गोल गर्ने उत्कृष्ट स्ट्राइकरको हस्ताक्षरको लागि लड्न तयार छन्।
बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोन लापोर्टाले हालान्डले रियल म्याड्रिडको जर्सी कहिल्यै लगाउने छैन भन्ने कुरामा दृढ छन्, तर उनको क्लबको हालको आर्थिक कठिनाइले उनीहरूलाई युवा स्ट्राइकरलाई अनुबन्ध गर्नबाट रोक्न सक्छ।
एकातिर एम्बाप्पेलाई फ्री ट्रान्सफरमा ल्याउन सकिने त अर्को तिर किलियन भित्र्याउने रकम हालंडमा हाल्न सकिने। रियल मड्रिडले यो मास्टर स्ट्रोक पक्कै पनि गुमाउन भने चाहदैन।
एर्लिङ हालान्डलाई भित्र्याउन रियल म्याड्रिड वा बार्सिलोनाले करिब ठुलो रकम छुट्याउनु पर्नेछ।
यो आंकडामा उनको रिलीज क्लज सक्रिय गर्न आवश्यक ७५ मिलियन यूरो, साथै उनको एजेन्ट मिनो राइओला र उनका बुबालाई भुक्तानी गरिएको कमिशन र छ वर्ष भन्दा बढी खेलाडीलाई भुक्तानी गरिने तलब समावेश छ।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #Haaland #hamro nepal sports #mbappe #real madrid
रियल मड्रिडलाई स्पेनिश सुपर कपको उपाधि
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| एथलेटिको बिल्वाओलाई २–० ले पराजित गर्दै रियल म्याड्रिडले १२औ पटक सुपर कपको उपाधि आफ्नो नाममा गरेको छ। साउदी अरबको रियादस्थित किङ फाद इन्टरनेसनल स्टेडियममा एथलेटिको बिल्वाओलाई पराजित गर्दै रियल म्याड्रिड स्पेनिस सुपर कप च्याम्पियन बनेको हो। १० खेलाडीमा समेटिएको रियलले २–० ले पराजित गर्दै एक वर्षपछि […]
युक्रेनबिरुद्द बिशाल जित निकाल्दै, इंग्ल्याण्ड युरो कपको सेमिफाइनलमा !!
एसियन कप छनोटको अन्तिम राउण्डबाट, एसियन कप २०२३ प्रवेश गर्ने बाटो कस्तो छ त ?
प्ले अफको पहिलो खेल अन्तर्गत काठमान्डौ र धनागढ़ी भिड्दै, यस्तो छ पछिल्लो तथ्यांक !!